Famafazana vaovao lainga : Manimba ny asa fanaovan-gazety -
AccueilSongandinaFamafazana vaovao lainga : Manimba ny asa fanaovan-gazety
Famafazana vaovao lainga : Manimba ny asa fanaovan-gazety
Manana toerana lehibe ny asa fanaovan-gazety manolona ny hetsika izay misy eo amin’ ny firenena iray, ary izany dia fitodihana mankany amin’ ny fitondrana fitoniana. Rehefa misy tokoa mantsy ny fiofanana momba ny asa gazety ka ny lohahevitra dia ny hoe “ny toeran’ ny asa fanaovan-gazety manoloana ny krizy” dia io no hazavain’ ny mpampiofona voalohany izay hoe entiny tamin’ ny zava- nisy tany Rwanda. Samy mahalala izany rahateo ny mpanao gazety izay manaraka fiofanana, izany hoe ireo mpanao gazety tanora. Tsy mahalala sy tsy mahafantatra io anjara toerana io kosa, ireo mpanao gazety izay efa goaika antitra sy zatra mpanao hitsin-dalana. Raha raisina manoloana ny zava- misy eto amin’ ny firenena ankehitriny ny zava-miseho, dia tsapa tokoa ny fisian’ ireo onjam-peo mitambatra izay mamadika vaovao, manely vaovao tsy marina ary koa ny fihantsiana . Izany hoe tsy manaja ny etika sy deontolojia izay tokony harahina amin’ ny asa fanaovan-gazety, ao anatin’ izany anjara asa izany ihany koa ny fanivanana ny vaovao izay mety hiteraka korontana .
Tsiahivina ohatra izao ny efa lainga nafafin’ireo fitambaran’ny onjam-peo ireo nandritra ny fanombohan’ny fihetsiketsehana izay notarihin’ny solombavambahoaka, nambaran’ireo mpanentana ny onjam-peo fa efatra no maty vokatry ny fifandonana. Ny zava-nisy anefa dia manaporofo ny tsy fahamarinam-baovao navoakan’izy ireo ny fisian’ ny fitondrana ireo razana miisa roa teny amin’ ny parvis Analakely. Tsy izany ihany fa teo koa ohatra ny filazana fa notapahan’ny fanjakana ny jiro ka tsy nampandeha ny onjam-peo, nefa dia nandiso izany ny fanambarana izay notanterahin’ ny JIRAMA nilaza fa noho ny fahasimbana ny fampandehanana ny herinaratra dia nisy ny fahatapahana. Tsy vitan’ ny mamoron-dainga ireto onjam-peo ireto, fa teo ihany koa ny fanaratsiany sy fihantsiany onjam-peo, izay tsy nanaiky niara-dalana tamin’izy ireo noho ny fahafantaran’ity onjam-peo ity fa tsy asa fanaovan-gazety intsony no tanterahina. Noho izany manoloana ireo tsy fanarahana intsony ny fepetra amin’ ny asa fanaovan-gazety sy amin’ny maha mpanao gazety, dia rariny ny antson’ ny filoham-pirenena nandritra ny filankevitry ny ministra raha niantso ny minisitra tompon’ andraikitra handray ny andraikiny sy hanitsy ireo izay mihoa-pefy